နေအိမ်» PCB- သတင်း» မိတ္တူ pcb board ဆိုတာဘာလဲ
copy pcb board ဆိုတာဘာလဲ
PCB copy သို့မဟုတ် PCB ပြောင်းခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ PCB copy board ၏အဓိပ္ပာယ်ကို PCB copy board ဟုလည်းခေါ်လေ့ရှိသည်။
For PCB copy , many people do not understand what exactly is PCB copy board, some people even think that PCB copy board isacottage. The cottage is the meaning of imitation in everyone’s understanding, but the PCB copy is definitely not imitation. The purpose of the PCB copy board is to learn the latest foreign electronic circuit design technology, and then absorb the excellent design scheme, and then use it to develop and design better The product.
PCB ကူးယူခြင်းအဆင့် ၆ - အခြေအနေနှင့်အညီသင့်လျော်သောချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်၍ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုသော့ခတ်ပါ
အကယ်၍ ဘုတ်ပေါ်ရှိနေရာများကခွင့်ပြုပါကသင်သည်ဘုတ်ပေါ်ရှိစမ်းသပ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆင်တူသည့်ဝါယာကြိုးအချို့ကိုထည့်နိုင်သည်။ ကြီးမားသောပျဉ်ပြားအဘို့, အလယ်၌ပိုပြီး fixing ဝက်အူတွင်းထည့်ပါ။ ဘုတ်၏ဘေးထွက်တွင်လေးလံသောကိရိယာများ (သို့) connectors ကဲ့သို့သောကြီးမားသောစိတ်ဖိစီးမှုပစ္စည်းများနှင့်အတူဘား၏ဘေးထွက်တွင်ဝက်အပေါက်များတပ်ဆင်သင့်သည်။ လိုအပ်ပါကအချို့သောကွင်းကွင်းများကိုသင့်တော်သောနေရာများတွင်ထားနိုင်သည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစားပါသော pad vias များကိုကြီးမားသောပြောင်းပါ။ fixed screw screw အပေါင်ပစ္စည်းများ၏ကွန်ယက်ကိုမြေပြင်သို့ (သို့) အကာအကွယ်ပေးထားသည်။
ကြည့်ရှုပြီးနောက်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ဆေး။ သိမ်းဆည်းရန် VIEW3D function ကိုအသုံးပြုပါ။
PCB ဒီဇိုင်း၏အဆင့် ၇ - PCB layout rules setting